Fifanekena amin'ny famelan-keloka - Fiangonan'Andriamanitra manerana izao tontolo izao Soisa
haino aman-jery > Mifantoha amin'i Jesosy > Mifantoha amin'i Jesosy 2020-02 > Fanekena ny famelan-keloka
Ahoana ny famelana heloka ny olona iray amin'ny tontolon'ny fiainana andavanandro? Tsy mora velively izany. Ny kolontsaina sasany dia manana fombafomba famelan-keloka tsy tapaka. Ohatra, ny Maasai any Tanzania dia manao Osotua, izay midika hoe "fanekena". Notantarain'i Vincent Donovan ny fomba fiasan'i Osotua ao amin'ny boky nosoratany hoe Ny Kristianisma Nahita indray. Raha nisy ny fandikan-dalàna natao tao anatin'ny vondrom-piarahamonina teo amin'ny fianakaviana, dia mety hisy fiatraikany ratsy amin'ny firaisan'ny foko mpifindra monina iray manontolo. Tandindomin-doza ny fiaraha-miaina.
Ilaina àry ny hiarahan'ireo andaniny roa amin'ny fifanolorana ho voavela heloka. Manomana sakafo ny vondrom-piarahamonina, izay andraisan'ny fianakaviana anjara. Samy tokony hanaiky sy hihinana ilay sakafo efa nomanina ny olona voakasik'izany io sy ilay mpanota. Ny sakafo dia antsoina hoe "sakafo masina". Ny hevitra fototra dia ny hoe ny famelan-keloka dia mifandray amin'ny fihinanana ny sakafo ary manomboka Osotua vaovao. Mahatalanjona tsotra sy tsotra!
Efa nizara sakafo masina tamin’ny olona tsy tianao na nanota tamin’olona iray ve ianao? Ahoana ny amin’ny fanasan’ny Tompo? Afaka manao fanekempihavanana vaovao momba ny famelan-keloka ve ianareo sy ny olona iray izay nanotanareo na nanota taminareo nandritra ny fiarahanareo mankalaza ny fanasan’ny Tompo? “Koa raha manatitra ny fanatitrao eo amin’ny alitara ianao, ka eo no hitanao fa manana alahelo aminao ny rahalahinao, dia avelao eo anoloan’ny alitara ny fanatitrao, ka mankanesa any aloha, ka ataovy izay hihavananao amin’ny rahalahinao, ary rehefa afaka izany, dia avia, manatera ny fanomezanao » (Matio 5,23-24)
Ahoana ny fivoriana iray hizarana "sakafo masina" miaraka? Sa ianao mitondra fihetseham-po mitovy amin'ny sakafo iray amin'ny manaraka? Maneho hevitra momba ny fanao Maasai i Donovan: "Ny fifanakalozana ny sakafo masina dia manaporofo ny famelan-keloka indray". Inona no fitahiana raha afaka manohana ilay antso ao amin'ny teny voalaza etsy ambony isika, Tompontsika sy Mpamonjy antsika.